Iloft ngaselwandle (iApartment Lena) - I-Airbnb
Iloft ngaselwandle (iApartment Lena)
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguAna
Iloft yangoku kunye neyobunewunewu, ngaselwandle, enombono omangalisayo!
ILoft imi kunxweme lwelali encinci yaseDalmatian iPostira kwisiqithi esikhulu saseDalmatian saseBrač.
Ingaphakathi elitsha, lanamhlanje kunye nesitayile esineefestile ezinkulu ezijonge elwandle kunye neentaba. Ngama-terraces amabini angasese kumgangatho ophezulu wendlu yangasese.
Iintanda ezizolileyo elunxwemeni ziimitha nje ezimbalwa ukusuka kwiflethi. Iilwandle zePebble ezinemivalo yimizuzu nje emihlanu macala onke ukusuka kwindlu.
Kukho igrill kunye negadi encinci yemifuno kwithafa elikhulu eliqhelekileyo elineebhedi zelanga, kwaye wamkelekile ukuba uyisebenzise. Indawo yokupaka yasimahla iphambi kwendlu.
5.0 · Izimvo eziyi-86
IPostira yasekwa ngenkulungwane ye-16 ngelixa abemi bokuqala yayingabantu baseDol nasePoljice abasuka kwiilali zabo. Izindlu ezininzi zamatye kwizibuko zobungqina malunga nabanini-mhlaba baseBrač bangaphambili; phakathi kwabo kuvelele inqaba yentsapho yaseLazanić apho imbongi yaseCroatia uVladimir Nazor (1876 - 1949) yazalwa. Icawe yeParish eyakhiwa embindini wenkulungwane ye-16 ibizwa ngokuba nguYohane uMbhaptizi ngelixa phantsi kwayo kufunyenwe iintsalela ze-basilica yamaKristu okuqala ukusuka kwinkulungwane yesi-6. Kwanezinye iindawo zakudala ezingqina imbali ende yePostira: iMirje kwinduli yeBrig yaseMali
Ukuba uhambahamba kwindawo yakudala yale dolophana, uya kuziva ngathi ubuyela kumaxesha adluleyo. Izikhephe ezixhonyiweyo ziphumle kwibhulorho encinane apho iintsapho ezininzi zazibulisa koomatiloshe bazo kodwa zikwalindele ngolangazelelo ukuba zibuye. Izitalato ezigaywe ngamatye engqalutye abizwa ngokuba yikogule ngeemilo zazo, zinika imbeko kwiinkosi zasekuhlaleni, zibaphatha ngokuba zikhokelela kweyona ndawo ingcwele - icawe yerhamente. Apha ePjaca (square) abantu babedanisa, bacule kwaye babukele. Izivalo ezivaliweyo zezindlu ezihloniphekileyo nanamhlanje zifihla iimfihlo malunga neentlanganiso zothando eziphumeleleyo xa abantu beza kukha amanzi kwimpompo yamanzi acocekileyo asekuhlaleni, ngelixa imidlalo yebhentshi yamatye, ukuhleka, ukuxabana kunye neencoko zihlokoma. Esi sikwere sincinci saseDalmatian sikhanya ngakumbi ngexesha le-fair (fjera) kunye nezinye iiholide ngokunjalo. Umbono okhethekileyo unikezelwa ngamaphahla amadala afakwe amathayili angabonwa endleleni eya elwandle, kungekhona nje ngendlela yabo yendabuko yokwakha, kodwa ngenxa yezidalwa ezingaphezu kwendalo ezikholelwa ukuba zihlala kwi-attics. I-Macić, i-vukodlak, i-marinorgo, kunye neefairies ziya kukuchukumisa ukucinga kwakho, ngakumbi ukuba amabali angawava kubaxeli bendawo.
Ungaphuthelwa isitalato esincinci esibizwa ngokuba "Ndivumele ndidlule" kwiinkundla ze-Škarić, apho inani elikhulu le-konobe (i-tavern) lihlala kwindawo enye. Abamkeli abanobubele baya kuvula ngokuzithandela kwaye bakubonise into abazidla ngayo.
*kogule– amatye engqalutye asetyenziswa eDalmatia ukulungisa izitalato
Uninzi lweendawo zokutyela kunye nekonobe (iithaveni) ziya kwanelisa neyona inkalakahla inzima kakhulu. Umlingo wencasa kunye namavumba abonakaliswe kwisitya ngasinye kwaye oko kucetyiswa ngokuqinisekileyo ziianchovies ezinetyuwa, iisardines ezigcadiweyo, i-pašticada (isitya senyama yesintu), itakane legusha elosiweyo kunye nemvana elungiselelwe phantsi kwesivalo sokubhaka, i-mendule u cukar (iialmondi ezigcadiweyo ngeswekile), ngokunjalo. njengoDol's homemade vitalac elungiselelwe izibilini zegusha (isitya esiqhelekileyo segusha okanye ibhokhwe) kunye neqebengwana lehrapoćuša eliqukwe kuluhlu lwezinto ezikhuselweyo zenkcubeko zeRiphabhliki yaseCroatia. Ubuncwane beSiqithi - ioyile yomnquma sisithako esingenakuthintelwa somnikelo wethu we-gastronomic. Gqibezela amava akho ngokungcamla iiwayini ezisemgangathweni zasekhaya phakathi kwazo okufanelekile ukucebisa iPlavac mali.
Imizuzu nje emi-5 ukusuka eLoft kukho ulwandle iMolo lozna.
Olu lwandle lwengqalutye lukwimpuma yePostira kwaye lunezinto ezininzi, Kukho ithuba lokuqesha izitulo zaselwandle kunye neambrela zelanga.
Ulwandle lukwanayo nebha yekofu, kwaye ungarenta izithuthuthu, izikhephe ezinyovwayo, iikayak, iitrampoline.
ILovrečina lunxweme olunomtsalane kakhulu lwesanti ukuya ngasempuma.
Kukho amabhodlo e-basilica enkulu yamaKristu okuqala ukusuka kwi-5th-6th inkulungwane ekufutshane.
Idolophana encinci iDol namhlanje inabemi abalikhulu ifumaneka kwiikhilomitha ezimbini emazantsi ukusuka ePostira. Le ndawo yoxolo noxolo sisikhululo esingenakuthintelwa kubakhenkethi abaninzi, apho abantu abathanda ukuhamba kunye nokukhwela ibhayisekile njengeDol banokufikelelwa kwiindlela ezahlukeneyo, ngeendlela ezicwangcisiweyo kunye neendlela. Kumnyango kanye, izindlu zamatye esintu ziya kukushiya uphefumla kunye nenani lemiqolomba eyenziwe ngamatye e-hrapoćuša, eyayifudula isetyenziswa njengendawo yokulala kwaye namhlanje iyikhusi leenkomo, izitya zokubasa umlilo, indawo yokuhlala amahobe, izikhova kunye ne-viver*.
* UVever sisidalwa sasentsomini esithi, ngokwamabali abahlali baseDol, sizimele kwimiqolomba yendawo. Sisidalwa esinokuthi "sifumaneke" kuphela kwiDol, kwaye ukuba unethamsanqa unokuva ukukhwaza kwayo.
Kwaye ukuba uthanda iholide esebenzayo kukho umzila wePostira-Vidova gora.
Ngumzila odibanisa umntla ukuya emazantsi esiqithi saseBrač. Ubude bayo bubonke buyi-21 km kunye nexesha lokuhamba malunga ne-approx. 6.5 iiyure. Kukho imitsalane emininzi yendalo kunye nenkcubeko kwindlela ngokwayo, ukusuka kwizikhumbuzo ze-archaeological kunye nolwakhiwo lwamatye owomileyo ukuya kwii-loookouts kunye nezinto ezikhuselweyo zendalo.
- kogule: iingqalutye zamatye ezazisetyenziswa mandulo ukugalela izitalato ezibalulekileyo zaseDalmatian.
- icawa encinci yaseSt Nicholas: le cawa encinci endala (ukususela ekupheleni kwekhulu le-11) yachithwa kwaye entsha yakhiwa kwiziseko zayo kwi-1908. Ekuqaleni kwenkulungwane ye-19 kwakhala intsimbi esikolweni. Ngaphezu kwesibingelelo somthi kukho i-triptych (ioyile eseyileni) ngumzobi wasekhaya ongenalwazi, uPavo Gospodnetić Bukovac owaqala ngo-1929.
-icawe yerhamente kaYohane umBhaptizi ukususela ngenkulungwane ye-16 kunye neentsalela zecawa yamaKristu okuqala ukusuka kwinkulungwane ye-6.
I-Mirje: i-monastery complex eqala ngenkulungwane ye-6 emi phakathi kwamaziko amabini abalulekileyo kwi-Adriatic yephondo: Ibhotwe likaDiocletian eSplit kunye neequarries zasebukhosini kufuphi ne-Škrip apho kwakhutshwa khona ilitye loyilo kwibhotwe lesikhumbuzo.
- iindonga zamatye ezomileyo: ezenziwe ngamatye endalo ngaphandle kokusetyenziswa kwezinto zokubopha. Ubuchule bokwakhiwa kwamatye owomileyo lilifa lemveli lendawo yeMeditera ukusuka kumaxesha angaphambili. Abasebenzi baqokelela ilitye emasimini kwaye babeka, bedala indawo yegadi ezizayo, iipeni zezilwanyana zasekhaya okanye iindonga zemida ngexesha elifanayo. Iinyoka ezakhiwe kwilitye elomileyo elinokubonwa kufutshane neDol yenye yezikhumbuzo zokugqibela zabasebenzi kunye nomzamo.
- IGažul: ilali yabelusi enezindlu zamatye kunye neentlanti zeenkomo ezibekwe kwindawo yokuqala yokuhlala abelusi baseBrač kweli thafa. Inxalenye ebizwa ngokuba yi-“Bežmeka stan” iphantsi kokhuseleko lweSebe lezenkcubeko. Iyinxalenye yendlu yamatye ekumgangatho omnye enentendelezo, iipeni, i-oveni, itanki yamanzi (gustirna) kunye nesithsaba esibiyelweyo kunye nedama elibiyelweyo. Ezi zindlu zakhiwa yintsapho yakwaGospodnetić ''Bežmek'' esuka eDol ngenkulungwane ye-19. EGažul kukwakho nendawo yokulala yasentabeni eyaziwa ngokuba yi''Gažul''.
-IVeli gažul: inqaba ephambili yeBrač kwiMfazwe yesibini yeHlabathi. Ubungqina boku bunker egciniweyo
- Indawo yokuhlala yepayina emnyama yaseDalmatian: umthi okhoyo osuka kusapho lwemithi yompayina enesithsaba esahlukileyo esimile okwesambrela. Inokufumaneka kuphela kwi-Biokovo, kwi-peninsula yasePelješac nakwiziqithi zaseBrač, eHvar naseKorčula.
- I-Korita: ulwalwa oluphumayo olunamachibi amathathu endalo, akhiwe kwilitye
- Vidova gora: Incopho iphakamileyo kwiziqithi Adriatic (778 m). Yathiywa ngegama lecawe encinci yaseSt Vitus eyaqala ngenkulungwane ye-13 neye-14 amabhodlo ayo asabonakala nanamhlanje. Abemi baseBrač basoloko benxibelelanisa iVidova gora kunye nesithixo sakudala samaSlavic, uSvevid, kunye namanye amabali amaninzi amnandi ayedityaniswe ngeenxa zonke kuyo. Xa kukho isibhakabhaka esicacileyo ezininzi iziqithi zaseDalmatian kunye neencopho zeeNtaba zeApennine zinokubonwa kuyo.
We are Ana and Frano. A couple from Brac.
We love traveling and meeting new people from all around the world.
Since we are now parents of two beautiful girls, we can't travel as much as we would like to, but we are happy when we meet new people, culture, kitchen ...through airbnb hosting.
Since we are now parents of two beautiful girls, we can't…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Postira